XAFLAD SAGOOTIN AH OO LOO QABTAY MAAMULAHA IIBKA IYO SUUQ GALINTA TELESOM BORAME | Toggaherer's Weblog
DHALINYARO SOMALI AH OO TAHRIIBAYA OO LAGU QABQABTAY XUDUUDKA U DHAXEEYA ITOBIYA & SUDAN
“C/laahi xaaji waxa uu astaan u yahay aqoon jacayl, holkarnimo, karti, firfircooni, waxqabad iyo odoynimo qiimo badan”
Habeenimadii xalay ahayd ayaa waxaa loogu qabtay xaflad sagootin ah,hotel rays oo si heersare loo soo agaasimay,waxana ka soo qayb galay dhamaan shaqaalaha waaxda iibka iyo xubno ka socda waaxda engineeringka ee siteka boorama.
Xafaladaa waxaa lagu furay aayado quraanka kariim ah ku furay sheekha shirkada Sheekh Deeq Cabdi Xasan.
Waxa ugu horayn halkaa ka hadlay masuul ka mid ah masuuliyiinta waaxda iibka ahaana masuul ay mataana ahaayeen mamule c/laahi oo ay ku mataanobeen in ay maalin qudha u wada shaqa galeen shirkada isgadhsiinta ee telesom waxa uuna yiri, “Walaahi mudadii aan shaqaynayay waligay maan arag qof la mid ah oo aan la shaqeeyo; waxa uu ahaa gacanteydii midig, wax uu ahaa nin leh karti, dadnimo, aqoon, samir, dulqaad, wada shaqayn iyo jeclaansho walaalnimo oon ka garab shaqaynayo. Waa nin anan la ilaawi Karin waxana ugu ducaynaynaa in uu ilahay ku guleeyo xilka cusub ee loo dhiibay allaha ku barakeeyo yeeynu leenahay.
Waxa kaloo halkaa isna ka hadlay Saciid Daa’uud Cumar oo kamid ah xubnihii soo agaasimay xaflada, kana mid ah xubnaha waaxda iibka waxa uu yiri, “Maanta waxaa aan lamid ahay oo aan dareemaya sidii hooyo xaalad fool ah ku jirta; hooyada xalada foosha ku jirta waxa ay u dhaxaysa laba xaladood oo isugu jira xalad farxadeed iyo xalad murugo leh; waxa ay ku fararaxsantahay ubadkan ay umulayso oo beerkeedi ah,in ay aragto, hadana markale waxa ay ka murugaysantahay xanuunka ay leedahay fooshu oo u dhaxaysa geeri iyo nolo. Anigana waxaan maanta aad uga murugaysanahay tagadi aan kala tageyno saxiibkayga aan mudada soo wada shaqanaynay, waxaanan ku faraxsanhay hormarka uu sameeyay iyo heerka sare ee uu gaadhay.
Waxa kaloo halkaa ka hadalay C/laahi Xaaji Maxamuud Jibriil oo ahaa mamulihii loo qabtay xaflada sagootiga waxa uu kula dardaaramay saaxibadiisa ay wada shaqaynta ka dhaxaysay, waxa uu yidhi “ Waa in aad wada shaqaysaan, oo midkiinba midka kale uu na xaasidin, ninwaliba shaqada ku qeexan job description-ka uu leeyahay in ka badan uu qabtaa, waxa kaluu intaa raciyay in mamulaha shirkada uu u aqoonsado qofka xafiiskiisa loo magacaabo uu u aqoonsado qof howlbadan oo adag haya, sidoo kale waxa uu sii raciyay, in uu xidhiidh joogta ah la lahaa xarumaha telesom ee dhamaan gobalada Somaliland, sidoo kale,waaxda farsamada ee boorama, waaxda iibka uu madaxa u ahaa, maamulaha shirkada boorama iyo macmiilka oo ahaa kan ugu muhimsan, oo intuba ay u baahanyihiin la shaqayn iyo macaamilo wanaagsan.”
Kadib waxa xafladii soo afjay maamulaha shirkda C/qaadir Aadan Nuur oo halkaa waxaa shahaado ku gudoonsiiyey, C/laahi xaaji max/ud Jibriil shahadada oo loogu magac daray, “Good Bye Certificate” Maamulahu wuxuuna halkaa ka qaatay doorkiisi maamulanimo waxa uuna yiri, “C/laahi ma jiro nin aan ku doorsan karo, , u malynmaayo in dhexdiinna aan ka heli karo cid la mid ah hadii ay jirto caawa yaa oran kara anaa badali kara? intaa kadib maamuluhu qiblada ayuu u jeestay wuuna u duceeyay c/laahi in uu ilahay u barakeyo shaqadiisa walalaha kale ee cusub ee uu la shaqayndoonana ilahay ugu dhigo kuwa macaan.
Cabdiraxmaan Maxamuud Jaamax “Awgaab”